यो साता कस्तो होला तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल – Khabar Patrika Np
यो साता कस्तो होला तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १५, २०७७ समय: १७:५०:२९
यो साता पारिवारिक साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । नयाँ व्यक्ति संग भेटघाट हुने समयछ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । साताको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । यात्रामा सावधानी पनि अपनाउनु पर्नेछ ।
यो साता रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । प्रेमिले नयाँ स्थानको भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन् । नयाँ काममा जुट्ने समय छ । मित्रजनबाट साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । मन लोभ्याउने पहिरनले अरूको नजर आफूमाथि पार्नेछ ।
यो साता बन्धुबान्धव, दाजुभाइ र साथीको सहयोग र हौसला मिल्नेछ । बुद्धिको उपयोग गर्दा जटिल ठानिएको कार्य सम्पादन हुनेछ । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग पनि मिल्नेछ । साताको मध्यमा दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ ।
यो साता मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । पर्यटकीय स्थलको भ्रमणले मन लोभ्याउनेछ । विशेष यज्ञयागादि तथा धार्मिक कृत्यमा सहभागीको अवसर मिल्नेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । जग्गाजमिनको कारोबार गर्दा राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ ।
यो साता रोकिएका अधुरा पुराना कामहरू पुरा हुनेछन् । पर्यटकीय स्थलको भ्रमणले मन लोभ्याउनेछ । सामाजिक क्षेत्रबाट मानसम्मान मिल्नेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । मध्य सातामा जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर छ । विचार पुर्याएर निर्णय लिनु राम्रो होला ।
यो साता बेला बेलामा मनमा अशान्ति तथा चञ्चलता आउन सक्छ । परिवारका लागि धेरै समय दिन पाइने छैन । जिम्मेवारीमा गरेको काममा समस्या आउन सक्छ, संयम रहनु होला । मध्य सातामा चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ ।
यो साता मंगल कार्यको योगछ । राजनीतिक कार्यमा ख्याती कमाउने योग छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथै आम्दानीका स्रोतपनि बढ्नेछन् । साताको अन्त्यमा व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ ।
यो साता दैनिक कार्यहरूमा प्रगति हुनेछ । रमणीय र सुखद् यात्राको योग छ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनुका साथै आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ प्रे।म । जीवन सबल र सफल रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्रको काम पनि अघी बढ्नेछ ।
महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ । पारिवारिक प्रेम र सद्भाव बढेर जानेछ । मन मिल्ने साथीको सहयोग र हौसला मिल्नेछ । आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्ला । सहयोगी हातहरू अघि बढ्नेछन् । भौतिक साधन जुटाउने समय छ । रमाइलो यात्राको योग रहेको छ ।
यो साता समय व्यवस्थापन गर्न गारो पर्नेछ । झुटा आरोप आईपर्दा समस्या खेप्नुपर्नेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । मध्य सातामा मित्रजनको साथ र सहयोगमा उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुनेछ । विभिन्न कार्यक्रममा नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ ।
यो साता ठुला व्यक्तिले तपाईँका मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनसक्छ । परिश्रम अनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइनेछ । बन्द व्यापार र पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।
साताको सुरुक दिनमा फजुल खर्चले चिन्ता बढाउने र बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । साताको मध्यमा शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक कार्यमा विशेष अभिरुचि रहनेछ । छोटो समयमा विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल (अधिक जानकारीका लागि 977-9849559502)